12 युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 12 युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल
स्वर्गदूतहरु, ताजा, गिलास चित्रित रंगीन उज्ज्वल विन्डोज, मा केहि तत्वहरु छन् 12 युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल. प्रत्येक गिरजाघर अग्लो छ, ठूलो, र अन्य भन्दा धेरै मनमोहक, प्रत्येक अन्य को तत्वहरु को विशेषता.
मिलान हरेक बर्ष लाखौं पर्यटकहरु लाई आकर्षित गर्दछ. मिलान कैथेड्रल, मिलान कैथेड्रल एक ल्याण्डमार्क हो कि तपाइँ पहिलो नजर बाट चकित हुनेछ. यो लिए 600 इटाली मा सबैभन्दा ठूलो क्याथेड्रल निर्माण गर्न को लागी, सुरुचिपूर्ण, मनोरम, र हल्का गुलाबी संगमरमर मा आश्चर्यजनक.
दाग गिलास विन्डोज, गोथिक तत्वहरु, र शीर्ष मा Madonnina सुनको मूर्ति तत्वहरु कि तपाइँ मोहित हुनेछ को मात्र केहि छन्. त्यसैले, यदि तपाइँ साँच्चै आकर्षक गोथिक मिलान कैथेड्रल को प्रशंसा गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसपछि तपाइँ छत मा हिड्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले, मिलान कैथेड्रल संसारको एक मात्र क्याथेड्रल हो, जहाँ तपाइँ छत मा हिड्न सक्नुहुन्छ.
2. Sagrada Familia कैथेड्रल, बार्सिलोना
एकमात्र गिरजाघर अझै प्रगति मा छ 1882, गौडी Sagrada Familia कैथेड्रल, कला को एक काम हो. Sagrada कैथेड्रल स्पेनिश लेट गोथिक को एक मिश्रण हो, कला नोव्यू, र कातालान आधुनिकता वास्तुकला. गौडीको डिजाइन थियो 18 भाला, को प्रतिनिधित्व गर्न 12 प्रेरितहरु, भर्जिन मेरी, चार जना प्रचारक, र सबैभन्दा अग्लो येशू ख्रीष्ट.
साथै, तीन facades को प्रत्येक एक बिल्कुल फरक बाहिरी छ: जुनून अनुहार, महिमा, र जन्म को मुखौटा. त्यसैले, धेरै देख्न र पत्ता लगाउनको साथ, राम्रो संग बार्सिलोना को लागी तपाइँको योजना बनाउनुहोस्, यस अद्भुत कैथेड्रल लाई नछुटाउनको लागी.
3. युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल: कोलनर कैथेड्रल, कोलोन
मा निर्मित7शताब्दी, कोलोन कैथेड्रल गोथिक वास्तुकला को एक लुभावनी प्रतीक हो. यसबाहेक, कोलोन कैथेड्रल कोलोन को आर्कबिशप र सबै युरोप मा अग्लो वसन्त चर्च को सीट हो.
चाखलाग्दो कुरा, यो भव्य स्थलचिन्ह फ्रान्सेली क्रान्ति को समयमा एक स्थिर र घाँस को खलिहान को लागी प्रयोग गरीयो. आज, तपाइँ कैथेड्रलको इतिहासमा यस चरणको कुनै अवशेष देख्नुहुने छैन. भित्री रंगीन गिलास विन्डोज र खजाना संग बाहिरी रूप मा मात्र सुन्दर छ. Kolner डोम विशेष गरी रात र सूर्यास्त रोशनी मा लुभावनी छ.
4. सान्ता मारिया डेल Fiore को बेसिलिका, फ्लोरेन्स
गुलाबी, हल्का हरियो, र सेतो संगमरमर मुखौटा, मोज़ेक भुइँ भित्र, फ्लोरेंस मा Basilica di सान्ता मारिया एक उल्लेखनीय पुनर्जागरण कैथेड्रल हो. यसबाहेक, Giorgio Vasari को छत मा ढिलो निर्णय को फ्रेस्को कला प्रेमीहरु द्वारा याद गर्न को लागी छैन।.
फ्लोरेन्स कैथेड्रल एक ल्याण्डमार्क भन्दा बढी छ. यदि तपाइँ कला मा इच्छुक हुनुहुन्न भने पनि, यो कैथेड्रल तपाइँ मोहित हुनेछ र तपाइँ घण्टा को लागी आश्चर्यजनक कलाकृति को प्रशंसा राख्नुहुनेछ. यदि तपाइँ ताजा हावा को एक सास को जरूरत छ, त्यसपछि जादुई फ्लोरेंस को दृश्य को लागी Brunelleschi Cupola मा चढ्नुहोस्.
5. युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल: चार्लेs क्याथेड्रल, भियना
भियना को प्रतीक, सेन्ट. चार्ल्स कैथेड्रल सेतो मुखौटा र हल्का हरियो गुम्बजहरुमा आश्चर्यजनक छ. Baroque शैली मा डिजाइन गरीएको, सेन्ट. चार्ल्स कैथेड्रल पछि आगन्तुकहरुलाई मोहित गर्दछ 19th सताब्दी. गिरजाघर संरक्षक संत चार्ल्स Borromeo सम्मान गर्न को लागी डिजाइन गरीएको थियो, फीडर, र मा यूरोप को विपत्ति मा पीडा को मन्त्री 16th सताब्दी.
तथापि, सेन्ट को सबैभन्दा आकर्षक सुविधा. चार्ल्स Basilica छ 1250 कोपुला मा वर्ग मीटर फ्रेस्को. अन्य युरोपेली गिरजाघरहरु को विपरीत, यहाँ तपाइँ नजिकै फ्रेस्कोस को प्रशंसा गर्न को लागी एक मनोरम लिफ्ट लिन सक्नुहुन्छ. त्यसैले, निष्कर्ष निकाल्नु, सेन्ट. वियना मा चार्ल्स कैथेड्रल तपाइँको याद गर्न को लागी छैन युरोप मा शहर छुट्टी बिदा.
6. Le Mans कैथेड्रल, फ्रान्स
सेन्ट जुलियन को लागी समर्पित, Le Mans को पहिलो बिशप, Le Mans कैथेड्रल, फ्रेन्च गोथिक शैली र रोमनस्क्यू नेभ को एक भव्य वास्तुशिल्प मिश्रण हो. एक आकर्षक सुविधाहरु छ कि तपाइँको ध्यान कब्जा हुनेछ एक buttresses एक शानदार डिजाइन मा बाहिरी समर्थन छ. यस प्रकार ले मानस कैथेड्रल को मुखौटा यूरोप मा सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक हो.
यसबाहेक, कैथेड्रल को छत मा चित्रित दाग गिलास र स्वर्गदूतहरु ले मान्स मा जोड्छन्’ लुकाउने वास्तुकला र तपाइँ को लागी धेरै खजाना को लागी यो 500 बर्ष पुरानो कैथेड्रल भित्र खोज्न को लागी छोड्नुहोस्.
7. युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल: सेन्ट. पावलको गिरजाघर, लन्डन
यो लन्डन को क्षितिज मा हावी छ, तर बाहिरी भागमा, सेन्ट पॉल कैथेड्रल सबैभन्दा लुभावनी स्थलहरु मध्ये एक होइन. सेन्ट को सौन्दर्य. पल को गिरजाघर आफैं प्रकट हुनेछ यदि तपाइँ भित्र हिड्ने समय लिनुभयो. त्यसपछि, तपाइँ सेतो र कालो सजावट को खेल मा छक्क पर्नुहुनेछ. यसबाहेक, क्याथेड्रल घरहरु भन्दा बढी 300 ब्रिटेनको उत्कृष्ट स्मारक, जस्तै Wren आफैं जो भव्य कैथेड्रल डिजाइन गरीयो.
तथापि, सेन्ट मा सबैभन्दा आकर्षक तत्वहरु मध्ये एक. पॉल कैथेड्रल फुसफुस ग्यालरी हो. हो, यदि तपाइँ ग्यालरी को एक छेउ मा कानाफूसी, भित्ताहरूले यसलाई अर्को छेउमा लैजान्छन्.
WWII मा गम्भीर क्षतिग्रस्त भए पनि, बर्लिन कैथेड्रल अगाडि एक फव्वारा र हरियो घाँस संग एक आश्चर्यजनक कैथेड्रल हो. बर्लिन कैथेड्रल बर्लिन शहर दरबार को भाग को रूप मा बनाइएको थियो, तर वास्तुकार जुलियस कार्ल Raschdorff सेन्ट को महिमा र भव्यता प्रतिबिम्बित गर्न यो रूपान्तरण. लन्डनमा पॉल कैथेड्रल. मा मात्र 1993, पुनर्स्थापना पूरा भयो, महान बर्लिन पर्खाल को पतन पछि.
बर्लिन कैथेड्रल मा सबैभन्दा आकर्षक तत्वहरु frescos छन्, सुनौलो सजावट, र मूर्तिहरु. साथै, यसको रोमान्टिक र मुटु पिघल्ने संगीत संग तश्तरी अंग जर्मनी मा अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो रोमान्टिक अंग बसिरहेको र मात्र लिस्टिंग को लागी समय समर्पण लायक छ।. यसरी, बर्लिन शहर दृश्यहरु को लागी एक मा तपाइँको भ्रमण पूरा गर्न को लागी अवलोकन मंच मा जानुहोस् 12 युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल.
9. युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल: सेन्ट बासिलको क्याथेड्रल, मास्को
मध्येको एउटा रूस मा भ्रमण गर्न को लागी सबैभन्दा आकर्षक ठाउँहरु मास्को मा सेन्ट तुलसी कैथेड्रल छ. तपाइँ यो अद्भुत कैथेड्रल याद गर्न सक्नुहुन्न र यो रेड स्क्वायर र बाहिर कुनै पनी बिन्दु बाट देख्नुहुनेछ. जब तपाइँ नजिक जानुहुन्छ, यसको वरिपरि नौ अन्य चर्चहरु संग एक केन्द्रीय चर्च.
सबैभन्दा मनमोहक विशेषता यो हो कि यी मन्दिरहरु विशेष भोल्ट मार्गहरु द्वारा आपसमा जोडिएका छन्. इवान द टेरिबल सेन्ट बेसिल कैथेड्रल पछाडि मास्टरमाइंड थियो, र बहुरंगी गुम्बजहरु आज सम्म एक रहस्य हो. जबकि डिजाइन को यो प्रकार १th औं शताब्दी मा देखा पर्‍यो, तर रंग को छनोट अज्ञात छ.
Gargoyles गुलाब र दाग गिलास विन्डोज छन्2सुविधाहरु को हो कि तपाइँ आकर्षित गर्नुहुनेछ पेरिस मा Notre Dame कैथेड्रल को लागी अन्य आगन्तुकहरु को लाखौं हुनेछ. बाहिरी भागमा भव्य, र भित्री सुन्दर, क्याथेड्रल को खजाना तपाइँ संसारको सबैभन्दा रोमान्टिक शहर माथि लिनुहुनेछ, लागि मनोरम दृश्य.
हाम्रो लेडी Ile de la Cite मा खडा छ र धन्य भर्जिन को लागी समर्पित छ. साथै, क्याथेड्रल नेपोलियन बोनापार्ट को राज्याभिषेक जस्तै प्रमुख घटनाहरु को लागी साइट थियो, र आर्क को जोन को beatification. यसरी, तपाइँको आँखा कैथेड्रल वास्तुकला को सौन्दर्य प्रशंसा हुनेछ, र तपाइँको कान महिमा को कथाहरु को प्रशंसा.
11. युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल: सेन्ट मार्क बेसिलिका, भेनिस
यो यूरोप मा सबैभन्दा सुन्दर basilicas मध्ये एक हो, तर यो गोप्य अवशेष हो कि सेन्ट मार्क बासिलिका घरहरु, यो युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रल बनाउन. पौराणिक कथाहरु अनुसार, सेन्ट मार्क बासिलिका मार्क इभान्जेलिस्ट को अवशेष घर बनाउन को लागी बनाइएको थियो, चार प्रेरित मध्ये एक, व्यापारीहरु इजिप्ट बाट चोरी पछि. यो कथा 13 औं सुविधाहरु शताब्दी मोज़ेक, बायाँ ढोका माथि जस्तै तपाइँ बेसिलिका मा प्रवेश गर्नुहोस्.
यसबाहेक, सेन्ट मार्कको बासिलिकामा शाही परिवारको मुकुट रत्न - पाला डोरो भन्दा धेरै बहुमूल्य खजाना छ. पाला एक बीजान्टियन परिवर्तन हो, भन्दा बढी संग जडित 2000 रत्न. निष्कर्षमा पुग्न गर्न, यदि तपाइँ भेनिस मा एक ल्याण्डमार्क भ्रमण गर्ने योजना बनाइरहनुभएको छ, सेन्ट मार्क बेसिलिका एक हो, जिज्ञासु को लागी, सौन्दर्य र इतिहास मायालु यात्रीहरु.
12. सेन्ट. Vitus कैथेड्रल, प्राग
नदीहरु पार, र पुलहरू, पौराणिक प्राग महल मा, you will be enchanted by Saint Vitus cathedral. It took close to6गोथिक कैथेड्रल पूरा गर्न शताब्दीहरु, प्राग मा उल्लेखनीय र सबैभन्दा उल्लेखनीय ल्याण्डमार्क को लागी. समय को मात्रा यो सेन्ट Vitus कैथेड्रल निर्माण गर्न लाग्यो शैली को वास्तुशिल्प मिश्रण मा प्रतिबिम्बित हुन्छ.
सेन्ट Vitus कैथेड्रल पुनर्जागरण छ, गोथिक, र Baroque तत्वहरु: दक्षिण टावर को स्पायर र उत्तरी भाग मा महान अंग जस्तै. दाग गिलास विन्डोज कुनै पनि गिरजाघर र सेन्ट मा एक उल्लेखनीय सुविधा हो. Vitus 'विन्डोज यूरोप मा अन्य आकर्षक कैथेड्रलहरु बाट सुन्दरता मा गिरावट छैन.
डब्ल्यूई तपाइँ यी को लागी एक अविस्मरणीय यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछ 12 रेल द्वारा युरोप मा आकर्षक कैथेड्रल, को संसारमा प्रवेश गर्नुहोस् एक ट्रेन सेव.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “ 12 युरोप मा सबैभन्दा आकर्षक कैथेड्रलहरु "तपाइँको साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fmost-fascinating-cathedrals-europe%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Beautifulcathedralseurope गिरजाघर Duomo famouscathedralsineurope FascinatingCathedrals